MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဒီဇင်ဘာ 2018 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: ဒီဇင်ဘာ 2018
MPT က အားကစားချစ်ပရိသတ်များအတွက် ရင်ခုန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်နှင့်အတူ Myanmar Sports portal ကို စတင်မိတ်ဆက်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်) – MPT ကို သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အားကစား Portal တစ်ခုဖြစ်သည့် “ Myanmar Sports” အမည်ရ အားကစား Portal ကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ HTML5 Sport Portal သည် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် မှ အသင်းများ၏ ရပ်တည်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ပွဲစဉ် ဂိုးအရေအတွက် ကဲ့သို့သော သတင်းများအပါအဝင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ နာမည်ကြီး အားကစားအစီအစဉ်များကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုဝန်ဆောင်မှုအသစ်တွင် အားကစား ဗီဒီယိုများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်လျှင် ငွေကျပ် ၁၅၀ တည်းဖြင့် ပေးသွင်း ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Myanmar Sports ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်အသစ်ကို Crystal Fusion ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် စုံလင်လှသည့် အားကစားနည်းများဖြစ်သော ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ ဂေါက်သီး၊ ဘောလုံး၊ လက်ဝှေ့နှင့် အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အားကစား အစီအစဉ်များ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အသစ်အသစ်သော အပိုင်းများကို ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသီးသန့် ဗွီဒီယိုများအပြင်၊ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်များ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသော အားကစားပွဲများ၏ ရလဒ်များ၊ အသင်းများ၏ အဆင့် ရပ်တည်မှုများ၊ အားကစားပွဲများ စတင်မည့် အချိန်များ အပါအဝင် ပုံမှန် အားကစား သတင်းများကိုလည်း သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုအစီအစဉ်သစ်တွင် MPT သုံးစွဲသူများအတွက် အထူးပရိုမိုရှင်းအဖြစ် တစ်ကျပ်သား ရွှေဒင်္ဂါးပြား ၃ ခု၊ MPT ဟန်းဆက် ၁၀ လုံးနှင့် ဖုန်းငွေဖြည့် လက်ဆောင်များ အပါအဝင် ဆုမဲပေါင်းများစွာ ကံစမ်းနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကံစမ်းမဲ ကာလမှာ လာမည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၉ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်သည်။
အားကစားအစီအစဉ်မှာ ဒေတာအသုံးများသည့် သုံးစွဲသူများအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးသည့် ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်သည်ကို MPT က နားလည်ထားကာ စိတ်ဖိစီးမှုများကို ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတူ လျော့ကျ စေသည့်အတွက် မိမိတို့သုံးစွဲသူများ၏ လူနေမှုဘဝပုံစံနှင့် ကိုက်ညီသည့် နှစ်သက်ဖွယ်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဂုဏ်ယူစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ အားကစားကဏ္ဍမှာ MPT က အဓိကဦးစားပေး လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ကဏ္ဍများအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး မြန်မာလူငယ် မျိုးဆက်သစ် အားကစားသမားများ ပိုမို ပေါ်ထွန်းလာစေရေး အတွက်လည်း ယခုနှစ်အစောပိုင်းက MNL နှင့်အတူ မဟာဗျူဟာကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်နှင့် အခြားသော လှုပ်ရှားမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
“ယနေ့ခေတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ အားကစားကိုစိတ်ပါဝင်စားမှုဟာ အရင်ကထက်ပိုပိုပြီး များပြားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထို့အတူပဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အားကစားသမား တွေ ပိုပြီးများပြားလာဖို့အတွက် အားလုံးက စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ သုံးစွဲသူ တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေကို အလေးထားတတ်တဲ့ အော်ပရေတာ ဖြစ်တာနဲ့အညီ မိမိတို့အနေနဲ့ အခုလို Myanmar Sports အစီအစဉ်ကနေ ပြည်တွင်းက အားကစားနည်းတွေနဲ့ တစ်ချိန်မှာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ မျိုးဆက်သစ်ကစားသမားတွေယှဉ်ပြိုင်မယ့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက အားကစား အစီအစဉ်တွေကို သက်သာတဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကို ဆောင်ယူပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Sports Portal ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အားကစားကဏ္ဍစုံက သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင် မယ့် ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် MPT အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ယခုအစီအစဉ်တွင် ဝင်ရောက်စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထောင်နှင့်ချီသောအားကစားသတင်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၇ ရက်အတွင်း အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ စာရင်းပေးသွင်းလိုပါက LoTaYaPortal မှ တစ်ဆင့် http://ms.lotayamm.com / (သို့မဟုတ်) http://myanmar-sport.com မှ တစ်ဆင့် (သို့မဟုတ်) မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ON ဟု ရိုက်နှိပ်ပြီး 8633 သို့ စာတို (SMS) ပေးပို့ အသုံးပြုနိုင်မည်လည်း ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းလိုပါကလည်း Myanmar Sport Portal သို့ဝင်ရောက်၍ http://myanmar-sport.com/ မှတစ်ဆင့် Help မှတစ်ဆင့် စာရင်းပယ်ဖျက်နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် တိုက်ရိုက်ပယ်ဖျက်လိုပါက Myanmar Sports Service အတွက် နံပါတ် 8633 သို့ OFF ဟု စာတို (SMS) ပေးပို့ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ MPT နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီး အားကစားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တွေ ထပ်မံဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းပဲဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဟာ သတင်းတွေနဲ့ ဗွီဒီယိုတွေ အပါအဝင် ရိုးရာနဲ့ နိုင်ငံတကာက အားကစားကဏ္ဍရဲ့ အသိပညာတွေ တိုးပွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားဝါသနာရှင်တွေအတွက် အရမ်း ကို အသုံးဝင်စေမယ့် Portal တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်သစ်မှာဆိုရင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက အားကစားနည်းတွေအပါဝင် သတင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အတွက် အသုံးပြုသူ တွေကို များစွာအကျိုးရှိစေမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကစပြီး ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပိုင်းတွေမှာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံများစွာ ရှိထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာနဲ့ဆက်စပ်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေ နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကို သယ်ဆောင်လာနိုင်မယ့်အလုပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်စွာ ဆောင်ရွက်လိုပြီး ကျွန်တော်တို့ တကယ်လည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေနဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူ အသစ်အသစ်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ ရှုထောင့်အမြင် အသစ်တွေကတစ်ဆင့် တန်ဖိုးတွေ ထပ်ဆောင်း ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု Crystal Fusion ကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာ Mr. Gokhan Eser က ပြောသည်။
Myanmar Sports ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက MPT ၏ www.mpt.com.mm ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင် ၁၀၆ သို့တိုက်ရိုက် ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 27, 2018 ဒီဇင်ဘာ 27, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
၂၀၁၉ ခုနှစ်ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ကျင်းပမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး နှစ်သစ်ကူး အကြိုဖျော်ဖြေရေးပွဲတော်တွင် အများပြည်သူများ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြနိုင်ရန် MPT မှ ဖိတ်ခေါ်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ၂၀၁၈၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ မှ ၂၀၁၉၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၁ နာရီ အထိ ရန်ကုန်မြို့ မိုင်ဒါကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးနှစ်သစ်ကူးကြိုပွဲတော်တွင် အများပြည်သူများ အတူတကွပါဝင်ဆင်နွှဲကြရန် MPT မှ ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။
အဆိုပါပွဲတော်အား မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူကြည့်အများဆုံးရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော MRTV-4 မှ ဦးဆောင်ကျင်းပ မည်ဖြစ်ပြီး လူအများမှ အထူးမျှော်လင့်ထားကြသည့် နှစ်သစ်အခါသမယ ၌ MPT မှလည်း တယ်လီကွန်းစပွန်ဆာအဖြစ် ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း အဆိုတော် ဖျော်ဖြေသူများစွာ ပါဝင်မည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်များ၊ အစားအသောက်နှင့် ဖက်ရှင်ဆိုင်ခန်းများကိုလည်း အများပြည်သူများ စိတ်အပန်းပြေပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်စေရန် ပြသပါဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဖျော်ဖြေပွဲကို ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြင့် ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဖျော်ဖြေပွဲလာရောက်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ မိသားစုများနှင့်အတူ MPT ၏ ပြခန်းနေရာများ၌ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဆုလက်ဆောင်များကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဂိမ်း များကစားခြင်းဖြင့် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MPT မှ သုံးစွဲသူများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များ အပြင် နှစ်သစ်ကူးအမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်မည့် photo booth များ၊ မျက်လှည့်ပြပွဲများ MPT ထောဘီအက ပြိုင်ပွဲ နှင့်အတူ ဆုရရှိသူများအားကြေညာပေးမည့် အစီအစဉ်များလည်းပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအဆိုတော်များဖြစ်သော သာဒီးလူ၊ နီနီခင်ဇော်၊ မိစန္ဒီ၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နှင့် အခြား နာမည်ကြီး အဆိုတော်များမှ ဖျော်ဖြေပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နာမည်ကြီး အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကောင်းထက်ဇော်နှင့်အတူ အခြားသော အနုပညာရှင်များမှ သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုသော အားဖြင့် countdown ကိုရေတွက်မည်ဖြစ်သလို မီးရှူးမီးပန်းများ လွှတ်တင်မည့် အစီအစဉ်လည်းပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ ကျွန်တော်တို့ MPT က ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကြီးကို တယ်လီကွန်း စပွန်ဆာ အနေနဲ့ ထပ်မံ ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကို နှုတ်ဆက်ပြီး၊ ၂၀၁၉ နှစ်သစ်ကို အတူတူကြိုဆိုကြဖို့ ရန်ကုန်မြို့မိုင်ဒါကွင်းကို လာရောက်ပြီးဆင်နွှဲကြဖို့ အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ ပျော်စရာအစီအစဉ်တွေအပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး ထိပ်တန်းအဆိုတော်များနဲ့ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်တာကြောင့် လူတိုင်းအတွက် အမှတ်ရစရာ နှစ်သစ်ကြိုဆို ပွဲလေးတစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် “ ဟုပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ပွဲအမည်: Myanmar Countdown Festival 2019
အချိန် : ၂၀၁၈၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ညနေ ၄ နာရီ) မှ ၂၀၁၉၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် (မနက် ၁ နာရီ) အထိ
နေရာ : မိုင်ဒါကွင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
MPT ၏ အရောင်းဆိုင်ခန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန် ၄ နာရီမှ စတင်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အစီအစဉ်များအား ပါဝင်နိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် မဆင်နွှဲနိုင်သူများအတွက် MRTV – 4, MRTV – 4HD, Channel – 7, Channel – 7HD ရုပ်သံလိုင်း များအပြင် အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် သော ရုပ်သံလိုင်း များဖြစ်သည့် Pyone Play, Channel7နှင့် Teen Radio တို့တွင် ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ ညနေ ၇ နာရီမှ စ၍ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၁ နာရီ အထိ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ထပ်မံသိရှိလိုခြင်း (သို့) MPT ၏ အခြားသော ကြေညာချက်များအား သိရှိလိုပါက ၁၀၆ သို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ www.mpt.com.mm နှင့် MPT ၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ www.facebook.com/mptofficialpage တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 26, 2018 ဒီဇင်ဘာ 26, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT ၏ မြန်နှုန်းမြင့် 4G/ LTE+ ကွန်ရက်ကို နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၁၄ မြို့နယ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်)- မြန်မာနိုင်ငံ၏ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT က ၎င်း၏ LTE+ မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက်ကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၁၄ မြို့နယ်သို့ လွှမ်းခြုံလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းကပင် မြို့နယ်ပေါင်း ၂၅၆ မြို့နယ်သို့ ရောက်ရှိဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ယခုလအတွင်း မြို့နယ်အသစ်ပေါင်း ၅၈ မြို့နယ်သို့ ထပ်မံ ဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော 4×4 MIMO ကွန်ရက်ပေါ်တွင်အခြေခံထားသည့် MPT ၏ မြန်နှုန်းမြင့် LTE+ ကွန်ရက်ကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ သုံးစွဲသူများ အားလုံး နီးနီး ခံစားရယူနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပြီး ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ၊ သတင်းများနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများအား အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုအသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် လှုမှုကွန်ရက်မီဒီယာများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
“ဒီလအတွင်းမှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ဆီကို ဖြန့်ကျက်ရောက်ရှိသွားနိုင်တဲ့အပေါ် အားလုံးနဲ့အတူ MPT အနေနဲ့လည်း အထူးပဲ ကျေနပ်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ LTE+ ကွန်ရက်ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကတည်းက ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိုဘိုင်းလ် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုင်းက လာမယ့်နှစ်တွေမှာ မြန်နှုန်းမြင့် 4G မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက်တွေ ရရှိခံစားရစေမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်မျိုးကို ရည်ရွယ်ထားရှိခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို တိုတောင်းတဲ့ ကာလအတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ 4×4 MIMO စနစ်သုံး LTE+ ကွန်ရက်ကို နိုင်ငံရဲ့ အဓိက မြို့နယ်ကြီးတွေဆီကို အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြန့်ကျက် ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သလို လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အွန်လိုင်းစနစ်တွေ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားက ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ရင်းမြစ်တွေကို အရင်ကနဲ့မတူဘဲအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ သယ်ဆောင်ပေးလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီး မှ အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် သုံးစွဲသူများက MPT မှ ပေးအပ်လျက်ရှိသော ကောင်းမွန်သည့် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု (VAS)များဖြစ်သော တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် ဖျော်ဖြေရေးများ၊ e-book များ၊ နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်း များကို နိုင်ငံအနှံ့အပြားချိတ်ဆက်ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်သည့် မြန်နှုန်းအမြင့်ဆုံးသော၊ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရသော MPT ၏ LTE+ ကွန်ရက်ပေါ်မှတစ်ဆင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်လည်းဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍ Mr. Reizo Umeda က “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော သုံးစွဲသူတွေကို MPT ကို သုံးစွဲပေးမှုအတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်လို့ ပြောကြားရင်း သုံးစွဲသူ တွေအနေနဲ့လည်း အဆင့်မြင့်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဆက်လက် သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်တဲ့ ကွန်ရက်အရည်အသွေးတွေကိုလည်း ခံစားအသုံးပြုကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ် သလို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံကိုရှေ့ကိုလှမ်းချီဖို့အတွက် မျှော်မှန်းထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
အသစ်ထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်သည့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း) နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့် MPT ၏ ကွန်ရက်ကို အပိုထပ်ဆောင်းငွေ ကျသင့်ခြင်းမရှိဘဲ 4G စနစ်အသုံးပြုနိုင်သည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီ် ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် အသစ်ထပ်မံဖြန့်ကျက်လိုက်သည့် မြို့နယ်ပေါင်း ၅၈ မြိ့နယ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ပဲခူး (အရှေ့ ) ကျောက်ကြီး
ရှမ်း (အရှေ့ ) မိုင်းတုံ
ရှမ်း (မြောက်) ဟိုပုံး
ရှမ်း (တောင်) လင်းခေး
LTE+ ချိတ်ဆက်ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်သည့် ဧရိယာများအကြောင်းနှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များ အကြောင်း ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၁၀၆ သို့ခေါ်ဆိုခြင်း (သို့) www.mpt.com.mm နှင့် MPT ၏ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ သို့ https://www.facebook.com/mptofficialpage သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 25, 2018 ဒီဇင်ဘာ 26, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
သုံးစွဲသူများအတွက် အထွေထွေဗဟုသုတများ တိုးပွားလာစေရေး အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်စေမည့် Quest To Million အစီအစဉ်သစ်ကို MPT စတင်မိတ်ဆက်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT က သုံးစွဲသူများ အတွက် ၎င်းတို့၏ အထွေထွေဗဟုသုတများ တိုးမြင့်လာစေရန်နှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် မေတ္တာလက်ဆောင်များ ပြန် လည်ပေးအပ်သွားမည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ Portal အသစ်ဖြစ်သော Quest To Million ကို ယနေ့စတင်မိတ် ဆက်လိုက်သည်။ နေ့စဉ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာမေးခွန်းတစ်ခုကို ရယူ၍ ဖြေဆိုရန်အတွက် အသုံးပြုသူများက 8576 သို့ ON ဟု စာတို(SMS) ပေးပို့ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းသွင်းခြင်းပြီးဆုံးသည်နှင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အတည်ပြုကြောင်း SMS ကို ရရှိမည် ဖြစ် သည်။ ယခုဝန်ဆောင်မှုမှာ တစ်နေ့တာချင်း စာရင်းပေးသွင်းအသုံးပြုရသည့် ဝန်ဆောင်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများက တစ်ရက်တာအတွက် ၉၉ ကျပ် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါဝင်ပြီး) ကျသင့်မည်လည်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်စာရင်းသွင်းအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် ၇ ရက်တာ အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုအတွင်းပါဝင်မည့် မေးခွန်းများကိုမူ တစ်ရက်ချင်းအလိုက် အသစ်အသစ်တို့ကို ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ရယူ အသုံးပြုသူတိုင်းက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော မေးခွန်းများကို အချိန်နှင့်အမျှ မိနစ်အလိုက် စဉ်းစား ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုရယူပြီးပါက မေးခွန်း ၅ ခုပါဝင်သည့် မေးမြန်းမှုတစ်ခုကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ရာ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုမှုများအတွက် အမှတ်များ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအမှတ်များမှာ နောက်ပိုင်းတွင် ဆုလက်ဆောင်များနှင့်လဲလှယ် နိုင်မည်လည်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မေးခွန်းများပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုအစုကို ထပ်မံရယူနိုင်ပြီး ထို့အတွက် ၉၉ ကျပ် ထပ်မံကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုကို Portal လင့်ခ် http://questtomio.com/ နှင့် လိုတရ Portal လင့်ခ် http://qtm.lotayamm.com/ တို့တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
တစ်နေ့တာဝန်ဆောင်မှုကို တစ်ကြိမ်ရယူပြီးပါက မေးခွန်း ၅ ခုပါဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအစုတစ်ခုကို ပေးပို့မည် ဖြစ်ပြီး ယင်းအတွက် အမှတ် ၁၀ မှတ်ကို အလိုအလျောက် ရရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းများ ပိုမို ရယူဖြေဆို ခြင်းဖြင့် အမှတ်အရေအတွက် ပိုမိုများပြားစွာရရှိမည်ဖြစ်၍ အောက်ဖော်ပြပါဇယားအတွင်း အမှတ်ပေးစာရင်း တွက်ချက်ပုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အဖြေမှန် ရရှိသည့် မေးခွန်း အရေအတွက် ရရှိမည့် အမှတ် အသေးစိတ်
ဝ ဝ –
၁ ၁ x ၂ = ၂ အဖြေမှန်မှုအတွက် ရမှတ် ၂ မှတ်
၂ ၂ x ၂ = ၄ အဖြေမှန်မှုအတွက် ရမှတ် ၂ မှတ်
၃ ၃ x ၂ = ၆ အဖြေမှန်မှုအတွက် ရမှတ် ၂ မှတ်
၄ ၄ x ၃ = ၁၂ အဖြေမှန်မှုအတွက် ရမှတ် ၃ မှတ် (အပိုဆု)
၅ ၅ x ၄ = ၂၀ အဖြေမှန်မှုအတွက် ရမှတ် ၄ မှတ် (အပိုဆု)
MPT-KSGM Joint Operations ၏ စီးပွားရေးရာဌာနမှ အရာရှိချုပ် Mr. Reizo Umeda က “သုံးစွဲသူတွေ အတွက် သူတို့ရဲ့ အထွေထွေဗဟုသုတတွေကို မြှင့်တင်ဖို့ရာမှာ စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုပြီး လုပ် ဆောင်နိုင်မယ့် Quest to Million ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မိတ်ဆက်နိုင်လို့ အရမ်းကို ကျေ နပ်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေအတွက်လည်း သူတို့ဖြေဆိုလို့ မှန်ကန်သွားတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် အမှတ် တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဒီအမှတ်တွေက နောက်ပိုင်းမှာ ဆုအဖြစ်ပြန်လည်ပေးအပ်မယ့် iPhone XS Mas ၊ OPPO F7 Youth ၊ Power Bank တွေနဲ့ မိုဘိုင်းလ်ငွေဖြည့်ကတ်တွေကို လဲလှယ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ အမှတ်အများဆုံး ရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ဆုငွေကျပ်တစ်သန်းကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ Quest to Million ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အတူ သုံးစွဲသူတွေအားလုံးအတွက် သူတို့ရဲ့ ဘဝမှာအရေးပါတဲ့ အဖိုးတန်ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မြန်မာ့အမြန်ဆုံး ကွန်ရက်ပေါ်ကနေ ပေးအပ်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်သလို အခု ဒီဝန်ဆောင်မှုကတစ်ဆင့်လည်း သုံးစွဲသူတွေ က သူတို့ရဲ့အထွေထွေဗဟုသုတတွေကို ပြသပြီး မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုရင်း တန်ဖိုးကြီးဆုလက်ဆောင်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
Quest to Million အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်ကောင်း၊ MPT ၏ အခြားသော ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၁၀၆ သို့ခေါ်ဆိုခြင်း (သို့) www.mpt.com.mm နှင့် MPT ၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘွတ် https://www.facebook.com/mptofficialpageသို့ ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါ သည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 19, 2018 ဒီဇင်ဘာ 21, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT Introduces New “Quest to Million” Platform that Helps Develop Users’ General Knowledge
(Yangon, 19th December 2018) Myanmar’s first and leading telecommunication, MPT has launched an exciting new portal, the “Quest to Million”, designed to offer attractive rewards to customers as they improve their overall general knowledge. To get daily one interesting question and answer of the question users just need to send SMS “ON” to 8576 and gain access to the service.
After the successful subscription, users will receiveaconfirmation SMS. This isadaily subscription-based service and customers will be charged 99 Ks per day including commercial tax. Very first time customers will get7days FOC. With the contents updated daily, subscribers can be sure of an engaging and up-to-the-minute experience. After subscribing, users will receive one quest everyday and5questions to be answered to receive points, which can later be redeemed for rewards. Users can purchase additional content and receive one quest at 99 Ks per quest via the service portal link: http://questtomio.com/ (or) lotaya portal link: http://qtm.lotayamm.com/.
After either completing the one-time purchase of the quest or daily subscription, the system will generate one content set, which includes5questions and users will receive 10 points as default. Answering more correct answers will result in earning more points. See the table below for the calculation of scores:
Number of Correct Questions Responses Points Awarded Details
1 1 x2=22 points/ correct question
22x2=42 points/ correct question
33x2=62 points/ correct question
44x3= 123points/ correct question (Bonus)
55x4= 204points/ correct question (Bonus)
Mr. Reizo Umeda, Chief Commercial Officer of MPT-KSGM Joint Operations said, “We are very pleased to announce the new service “Quest to Million” for our users to easily participate and build up their general knowledge in an engaging way as they complete exciting “quests”. Users will get even more points for every correct response, which they can later redeem for attractive prizes such as iPhone XS Max, OPPO F7 Youth, Power Bank and Mobile Top up Top players will also be able to join entertainment Quest To Million TV shows on MRTV to standachance to be crowned champions for even bigger prizes worthamillion kyats. Through all our services, we aim to enrich the lives of our subscribers on Myanmar’s first and leading mobile network and we hope customers take these quest challenges and win big through demonstrating their general knowledge ability.”
For more information on “Quest to Million” program and MPT’s other promotions, call 106, or visit www.mpt.com.mm and MPT Official Facebook page https://www.facebook.com/mptofficialpage.
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 19, 2018 ဒီဇင်ဘာ 21, 2018 Categories Latest News, Press Releases
မြန်မာတစ်ဝန်းရှိ ဒေသ ၁၈ ခုတွင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ပြုလုပ်မည့် “ သန့်ရှင်းခေတ်မီရှေ့သို့ချီ” နိုင်ငံအဝှမ်းစုပေါင်း သန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှု၌ ပြည်သူလူထုမှ အတူပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန် MPT က ဖိတ်ခေါ်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ MPT က မြန်မာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဒေသ ၁၈ ခုတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့၌ MPT ဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုဝင်များ၊ ယင်းတို့၏ မိတ်ဆွေများနှင့် ပြည်သူအများ အတူစုပေါင်း၍ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးရှိ ထင်ရှားသည့် နေရာများ၊ ဘုရားစေတီများနှင့် အများပြည်သူတို့သွားလာရာ အထင်ကရ နေရာများတွင် အမှိုက်ကင်းစင်စေရေး အတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုလို လူအများစုပေါင်းပါဝင်သည့် လှုပ်ရှားမှု၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိတို့နေ့ထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းစေရေးနှင့် ကျန်းမာသည့် နေထိုင်မှုအလေ့အထများ လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွင်း ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးမှာ အရေးကြီးကြောင်း အများပြည်သူများအနေဖြင့် ပိုမိုသိရှိလာစေရန်အတွက် လူထောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ခြင်းဖြင့် အင်တိုက် အားတိုက် ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
သန့်ရှင်းခေတ်မီ ရှေ့သို့ချီ စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါနေရာ များတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
စဉ် တိုင်း ပြည်နယ် နေရာ
၁။ ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဦးပန်းခြံဆိပ်ကမ်း(မင်းရပ်ရပ်ကွက်)မှ ဝန်းသိုဘုန်းကြီးကျောင်း ဆိပ်ကမ်း(ရှမ်းစုမြောက်ရပ်ကွက်)အထိ (မြစ်ကြီးနား)
၂။ ကယားပြည်နယ် သီရိမင်္ဂလာဈေး (လွိုင်ကော်)
၃။ ကရင်ပြည်နယ် ကန်သာယာပတ်ဝန်းကျင် (ဘားအံ)
၄။ ချင်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ဟားခါး)
၅။ မွန်ပြည်နယ် သီရိမြိုင်ရပ်ကွက်၊(ပင်စင်စား) ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တစ်လျှောက် (မော်လမြိုင်)
၆။ ရခိုင်ပြည်နယ် ပွိုင့် ကမ်းခြေ (စစ်တွေ)
၇။ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့) နောင်တုံကန်ပတ်လမ်း (ကျိုင်းတုံ)
၈။ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်) အနာက်မြို့ပတ်လမ်း၊ ကျောက်တလုံး၊ ကက္ကူသွားလမ်း (တောင်ကြီး)
၉။ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်) သူနာပြုနှင့် သားဖွားသင်တန်းကျောင်း မြို့မဈေးနှင့် လားရှိုး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (လားရှိုး)
၁၀။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ အင်းယားကန်ဘောင်(ကမ္ဘာအေးလမ်းမကြီး)
၁၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သုဓမ္မာဇရပ်များတလျောက်(မန္တလေးမြို့ ကျုံးမြောက်ဖက်)၊၁၂ – ၆၆လမ်းနှင့် ကျောက်တော်ကြီးဘုရားကြီး(မန္တလေး)
၁၂။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြသလွန်စေတီတော် (မကွေး)
၁၃။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကန်သာယာ။ ကွေ့ကြီးရပ်ကွက် (မုံရွာ)
၁၄။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့) မဟာစေတီဘုရား (ပဲခူး)
၁၅။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်) ကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက် (ပြည်)
၁၆။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဦးပါရဲဘုရားဝန်း (ဟင်္သာတ)
၁၇။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး နေရာ ၁ – ထားဝယ်ပညာရေးကောလိပ်မှ ရေးလမ်းထောင့်လမ်းဆုံထိ
နေရာ ၂ – ထားဝယ်ပညာရေးကောလိပ်မှ အာဇာနည်လမ်းအထိ (ထားဝယ်)
၁၈။ နေပြည်တော် မြို့မဈေး နှင့် ကားဂိတ် (နေပြည်တော်)
MPT-KSGM Joint Operations ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဌာနမှ အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Yoshiaki Benino က “ အခုပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုက ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးဒီတစ်ခေါက်မှာ အရင်ကထက်စာရင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေပိုပြီး ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရခြင်းက ကျွန်တော်တို့ MPT ဝန်ထမ်း တွေသာမကပဲ ပြည်သူလူထုတွေကပါ ဒီအစီအစဉ်ကို ပါဝင်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတာကို ပြသလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ တစ်ခုအနေနဲ့ အများပြည်သူနဲ့ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၆,၀၀၀ ကျော် က ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာ ဝိုင်းဝန်းသန့်ရှင်းအောင်ကူညီခြင်းနဲ့ ပါဝင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်း သွားလာနေကြတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ အမှိုက်သရိုက်တွေစွန့် ပစ်တာမျိုးနဲ့ တံတွေးထွေးတာလိုမျိုး စတဲ့လုပ်ရပ်တွေ လုပ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲလို အပြုအမူတွေက လှပတဲ့နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်နွမ်းစေရုံသာမကဘဲ ကျန်းမာရေးကိုလဲ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လဲလူတိုင်းအတွက် သန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာစေတဲ့ နေရာတွေဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းကြဖို့ အကြံပေးချင် တာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ Mr. Yoshiaki Benino က “ နှလုံးသားထဲကမြန်မာ ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တွေကို သာမကဘဲ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဒေသတွင်းအစိုးရနဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ အတူပူးပေါင်းပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ပါဝင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အော် ပရေတာတစ်ခု ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်အရမ်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အားလုံး အတူတူ ဝိုင်းဝန်းပြီး ပါဝင်တဲ့ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့နေ့လေးတစ်ရက်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြား သည်။
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း သန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကို MPT ၏ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် ပြင်ပမှ စေတနာရှင် စုစုပေါင်း ၆,၀၀၀ ကျော်မှ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးရှိ ပြည်သူများ၏ လူမှုဝန်းကျင်သာယာလှပ စေရေးအတွက် စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် ထူးခြားအောင်မြင်သော ပွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခုအားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့် မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သာယာလှပမှုကို ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာရေရှည်အတွက် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာများတွင် MPT၏ ရည်မှန်းချက်များဖြစ်သော ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍများ တွင်လည်းအကျိုးပြုသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ၌ နေထိုင်ခြင်းဖြင့် အထူးသဖြင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေး ကိုထိခိုက်စေနိုင်သော အန္တရာယ်ရှိသော အကျိုးဆက်များမှ ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 18, 2018 ဒီဇင်ဘာ 27, 2018 Categories CSR Activitiesmm, Latest Newsmm, Press Releasesmm
စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှုန်းထားများဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များကို ရယူနိုင်မည့် Content Data Bundle ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို MPT စတင်မိတ်ဆက်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်)- MPT က သုံးစွဲသူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ထောင်နှင့်ချီသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ တီဗီအစီအစဉ်များကို အခပေးရန်မလိုဘဲ Viu မိုဘိုင်းလ်အက်ပလီ ကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် 1 MB လျှင် တစ်ကျပ်နှုန်းထားဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မည့် ဒေတာပက်ကေ့ချ်အသစ်တစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပထမဆုံးအနေဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ မိတ်ဖက်အဖြစ် စတင်လက်တွဲလိုက်သည့် Viu မှာ နိုင်ငံတကာမှ လူကြိုက်အများဆုံး တီဗွီအစီအစဉ်များနှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အများအပြားကို မြန်မာစာတန်းထိုးအပြည့်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သော ပထမဦးဆုံးနှင့် ထိပ်တန်းဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုတွင် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Running Man နှင့် An Empress’s Dignity ကဲ့သို့သော ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ လူကြိုက်များ ဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ နောက်ဆုံးထွက်အပိုင်းသစ်များ အပါအဝင် အာရှတိုက်ရှိ နာမည်ကျော်ရုပ်သံရှိုးများနှင့် ရုပ်ရှင်များကို စိတ်ကြိုက် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စာရင်းပေးသွင်းပြီးသည်နှင့် MPT သုံးစွဲသူများက Viu အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး MPT ၏ နိုင်ငံအနှံ့ချိတ်ဆက်ထားသည့် မြန်နှုန်းမြင့် 3G/LTE+ ကွန်ရက်ပေါ်မှ တစ်ဆင့် ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက် တီဗီရှိုးအစီအစဉ်များကို စာရင်းပေးသွင်းခ ထပ်မံပေးရန်မလိုအပ်ဘဲ ချက်ချင်းကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသော ကိုရီးယား ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် အမျိုးအစားစုံဇာတ်လမ်းတွဲများအပြင် အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ထိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးမြင့်ဇာတ်ကားများနှင့် ဇာတ်လမ်းများကို Viu အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အချို့သော ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများကို ၎င်းတို့နိုင်ငံမှ မူလ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုအပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း မြန်မာစာတန်းထိုးဖြင့် Viu အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ပြသပေးသွား မည်ဖြစ်ပြီး MPT ၏ Viu ဒေတာပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတိုင်းက ပရီမီယမ်သုံးစွဲသူအဖြစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ အားလုံးကိုဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီးမှ အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်တာနဲ့အညီ အခုလို Viu ရဲ့ ပရီမီယမ်တီဗွီရှိုးနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ ဒေတာပက်ကေ့ချ်နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ မိတ်ဆက် လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် အထူးပဲစိတ်လှုပ်ရှား နေမိပါတယ်။ Viu နဲ့ မိတ်ဖက်အဖြစ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုနဲ့အတူ MPT က သုံးစွဲသူတွေအတွက် ဒေတာပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်လိုက်ရုံနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေပါဝင်တဲ့ ကဏ္ဍတွေကို အပြည့်အဝ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးတော့ Viu ရဲ့ သီးသန့်ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်တွေကို စာရင်းပေးသွင်းခ ထပ်ပေးစရာမလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သလို ဒေတာနှုန်းထားကလည်း 1MB ကို တစ်ကျပ်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်လို့ တကယ်ကို ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်စေမှာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
MPT ၏ Viu ဒေတာပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူစာရင်းသွင်းရန်အတွက် *8002# သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူပြီးပါက သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အတည်ပြုချက် SMS (စာတို)တစ်စောင် ကို လက်ခံရရှိပြီး အဆိုပါ စာတိုနှင့်အတူ Viu ဒေတာ 500 MB နှင့် Viu ၏ ပရီမီယမ်သုံးစွဲသူအဖြစ်သတ်မှတ်သည့် ကုတ်နံပါတ် တစ်ခုကိုပါ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သုံးစွဲသူများက Viu အက်ပလီကေးရှင်းသို့ဝင် ရောက်၍ ရရှိထားသည့် ကုတ်နံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် ၎င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှင့် အစီအစဉ်များကို ၂၄ နာရီအတွင်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ စတင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဒေတာပက်ကေ့ချ် မှာ 1MB လျှင် တစ်ကျပ်နှုန်းဖြင့် တစ်ရက်လျှင် 500 MB အတွက် ၄၉၉ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
Viu အက်ပလီကေးရှင်းကို Google Play Store (သို့) ယခု https://www.viu.com/ott/web/mm/viu.apk လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Mr. Reizo Umeda က “ကျွန်တော်တို့ MPT အနေနဲ့ နိုင်ငံအနှံ့အပြားကို ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 3G/LET+ ကွန်ရက်ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူတွေအတွက် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို အထောက်ပံ့ပေးဖို့ အမြဲတမ်းရည်ရွယ်ထားသလို အနာဂတ်မှာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ MPT ရဲ့ Viu ဒေတာပက်ကေ့ချ်နဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေက သူတို့စိတ်ကြိုက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာ မဆို ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်လို့ သုံးစွဲသူတွေက သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အခုဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကတစ်ဆင့် အရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။” ဟု ထပ်လောင်း ပြောသည်။
MPT Viu ဒေတာပက်ကေ့ချ်နှင့်ပတ်သက်၍ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၁၀၆ သို့ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပြီး MPT ၏ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကလည်း MPT ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် www.mpt.com.mm သို့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/mptofficialpage/ သို့ဝင် ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 17, 2018 ဒီဇင်ဘာ 18, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT က Smart Kids Portal ဝန်ဆောင်မှု မှတစ်ဆင့် ကလေးငယ်များအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပညာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ နှင့် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တို့ကို ယူဆောင်လာ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT က ကလေးငယ်များအတွက် စွဲမက်စရာကောင်းသည့် ပညာရေး အသိပညာဗဟုသုတ နှင့် ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍစုံလင်ပါဝင်သည့် အွန်လိုင်းပေါ်တယ်လ် တစ်ခုဖြစ်သော Smart Kids ဝန်ဆောင်မှု အသစ်ကို Crystal Fusion ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်း၍ ယနေ့ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယခုလို ကဏ္ဍအစုံအလင်ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုအသစ်မှတစ်ဆင့် မိဘများအနေဖြင့် ကလေးငယ်များကို ဦးတည်ထားကာ ထုတ်လုပ်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပါဝင်သည့် အချက်များကို လုံခြုံသည့် ရင်းမြစ်များမှ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုလို Smart Kids ဝန်ဆောင်မှု အသစ်မှတစ်ဆင့် ကလေးများ ကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် ပျော်ရွှင်စရာသီချင်းများ ၊ ပုံပြင်များ၊ အရောင်အသွေးစုံလင်သော ရုပ်ပြများ၊ ရာသီခွင် ဗေဒင်အလိုက် အကြောင်းအရာများ၊ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်အားကောင်းစေမည့် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ၊ ကလေးငယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိဘများအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေ ဗဟုသုတများ အစရှိသည်ကို မိဘများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ သားသမီးများအတွက် ဦးတည်ထားသည့် လုံခြုံဘေးကင်းသော သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဗဟုသုတ ရရှိစေမည့် အစီအစဉ်များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ၏ မိုဘိုင်းလ်ပစ္စည်းများနှင့် ကွန်ပျူတာများမှတစ်ဆင့် Web Browser မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ပညာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ် အားလုံးကို တစ်ရက်လျှင် ငွေကျပ် ၁၅၀ သာကျသင့်ပြီး ရယူအသုံးပြုနိုင်မည့်အပြင် မိမိစိတ်ကြိုက်ကဏ္ဍတွေကို ၇ ရက်တာ အခမဲ့ ရယူသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Smart Kids ဝန်ဆောင်မှုသည် ကလေးငယ်များကို အနာဂတ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လိုအပ်သည့် ဖန်တီးမှုနှင့် အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာတို့ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်အပြင် မိဘများက ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် စနစ်ပါရှိ သောကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် မိမိတို့ ကလေးငယ်များ မည်သည်ကို ကြည့်နေသည်ဆိုသည်နှင့် မည်မျှကြာအောင် ကြည့်နေသည်ဆိုသည် တို့ကို ကန့်သတ်ထားနိုင်ရန်လည်း ဒီဇိုင်းထွင် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ယခုလို ဝန်ဆောင်မှုကိုမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတူ ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် အသုံးပြုသူများထဲမှ ကံထူးရှင်(၁၀) ဦးကို ဇန်နဝါရီ (၂၅) ရက် အထိ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်ပြုလုပ်၍ ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ ကံထူးသူများအတွက် LEGO® အရုပ်ဆက်ကစားသည့် TOY SET တစ်ခုစီကို အပတ်စဉ် ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
“ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မိဘတိုင်းလိုပဲ မြန်မာပြည်က မိဘတွေကလည်း သူတို့ရင်သွေးငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ် ပညာရေးခရီးလမ်းမှာ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေအဖြစ် လျှောက်လှမ်းစေချင်တာ မိဘတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ သင်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်နဲ့ ဖန်တီးမှု စွမ်းရည်တွေ ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုကို လိုလားတာနဲ့အညီ အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ ဒီထက်ပိုများတဲ့အချက်အလက်တွေကို တစ်ရက်မှာ ငွေကျပ် ၁၅၀ ဆိုတဲ့ သက်သာတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်စေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ MPT ရဲ့ Smart Kids ဝန်ဆောင်မှုကအသစ်က အထောက်အပံ့ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဦးဆောင် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်တာနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း တကယ့်ကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးအပ်သွားဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီး ကလေးငယ်တွေကို စောင့်ကြည့်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြစ်စေမယ့် အခုအစီအစဉ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံအနှံ့ကွန်ရက်ကတစ်ဆင့် MPT အသုံးပြုသူတွေ ရယူသုံးစွဲနိုင်မယ့် အံ့သြနှစ်ခြိုက်စရာ ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားသစ် တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု MPT-KSGM Joint Operations မှ စီးပွားရေးဌာနကြီး၏ အရာရှိချုပ် Mr. Reizo Umeda က ပြောသည်။
Crystal Fusion ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mr. Gokhan Eser က “စမတ်ဖုန်းတွေက နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေ ကို အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲပစ်လာနေပါပြီ။ ယနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းက သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အသုံးတည့်မယ့် အက်ပလီကေးရှင်းတွေအများအပြားနဲ့ Portal များစွာကို အသုံးပြုနေကြရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စမတ်ဖုန်းတွေသုံးပြီး အင်တာနက်ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် သူတို့သင်ယူလေ့လာလိုတဲ့ အရင်းအမြစ်များစွာ ရှိနေလို့ပါ ပဲ။ Smart Kids ဟာဆိုရင် ကလေးငယ်တွေကို စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေမယ့် ကဏ္ဍတွေများစွာပါဝင်ပြီး ဒီကဏ္ဍတွေက လုံခြုံစိတ်ချရပြီး သင်ကြားရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ ပုံပြင်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာတေးသီချင်းတွေ၊ အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ ရုပ်ပြများ၊ ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိတွေက သူတို့လေးတွေကို ပျော်ရွှင်စေမှာဖြစ်ပြီးတော့ မိဘတွေနဲ့ သူတို့ချစ်တဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်စရာ ခံစားမှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Smart Kids Portal ဝန်ဆောင်မှုသို့ဝင်ရောက်ရန်အတွက် www.my-smartkids.com သို့ MPT ၏ လိုတရ Portal http://sk.lotayamm.com/ ကို ကွန်ပျူတာ (သို့) မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 8533 သို့ KID ဟု စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်း ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိလိုပါက 106 သို့ ခေါ်ဆိုခြင်း၊ www.mpt.com.mm (သို့) နှင့် MPT ၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/mptofficialpage သို့ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 12, 2018 ဒီဇင်ဘာ 13, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT Name Tune FAQs MM
MPT Name Tune
၁။ Name Tune အကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။
မိမိထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုလာသောအချိန် ခေါ်ဆိုသူမှကြားရသော calling ring အသံနေရာတွင် မိမိနာမည်ပါဝင်သော သာယာကြည်နူးဖွယ် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားသံများဖြင့် အစားထိုးထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သော Name Tune ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ CRBT ဝန်ဆောင်မှု၏ အောက်တွင်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Name Tune ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်ကရယူနိုင်မလဲ။
Name Tune ဝန်ဆောင်မှုကို http://lotaya.mpt.com.mm/service/crbt/name-tune
လိုတရ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ အမည်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ 7979 ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အမည် ရွေးချယ်လို့ရပါသလား။
မရရှိသေးပါ။ နာမည်ရွေးခြယ်ရန် လိုတရ (သို့) MPT call center-106 (သို့)
၄။ စာရင်းသွင်းခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။
CRBT ဝန်ဆောင်မှုအတွက် တစ်ရက်အသုံးပြုမှုအတွက် ၄၇ ကျပ်နှုန်း စာရင်းသွင်းရမှာ ဖြစ်သလို၊ တစ်လအသုံးပြုမှုအတွက် ၁၀၅၀ ကျပ်နှုန်း ကျသင့်မှာပါ။ Name Tune တစ်ပုဒ်အတွက် တစ်လလျှင် ၃၁၅ ကျပ်နှုန်း ကျသင့်မှာပါ။
၅။ အခြားသီချင်းတွေ ဝယ်ထားပါက ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ။
အခြားသီချင်းဝယ်ထားပြီး Name Tune ထပ်ဝယ်ပါက တစ်လှည့်စီ သီချင်းသံ ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ဘယ်သူတွေ အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ။
MPT Sim Card အသုံးပြုသည့် မည်သူမဆို အခြား Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုများအား ရယူရသည့် အတိုင်း လွယ်ကူစွာရယူနိုင်ပါသည်။
၇။ Name Tune ကို ဖျက်ချင်ရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
အခြားသီချင်းများကဲ့သို့ဝယ်ယူထားသော Name Tune code ကို ၇၉၇၉ သို့ပေးပို့ပြီး ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ-Del0000011111 or Del 0000011111
၈။ မသုံးချင်တော့ရင်/စာရင်းဖျက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
၇၉၇၉ သို့ UNR ဟုပေးပို့ စာရင်းအား ရပ်ဆိုင်း၊ ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
၉။ စာရင်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာ လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။
ဒါဆိုရင်စာရင်းသွင်းလို့မရနိုင်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း မရရှိနိုင်ပါ။ ဖုန်းငွေအလုံအလောက်ဖြည့်ပြီးမှသာ စာရင်းပြန်သွင်းကြည့်ပါ။ CRBT ဝန်ဆောင်မှု အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ဘယ်နေ့စတင် မိတ်ဆက်မှာလဲ။
၁၂.၁၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့မှာ စတင်မှာပါ။
၁၁။ Name Tune ကို ရယူရင် ဘာတွေ ကံစမ်းနိုင်မှာလဲ။
Name Tune ကို ရယူထားသူများ အနေဖြင့် iPhone XS တစ်လုံး ကံထူးနိုင်မှာပါ။ ပထမဆုံးရယူတဲ့ အယောက် တစ်ရာကိုလည်း ဖုန်းငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်ဖြည့်ပေးမှာပါ။ ကံစမ်းမဲကာလမှာ ၃ လကြာမြင့်မှာပါ။ ၁၂.၁၂.၂၀၁၈ မှ ၁၂.၀၃.၂၀၁၉ အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုမဲပေါက်သူသည် MPT ရုံး သို့မဟုတ် content provider ရုံးသို့လာရောက်ထုတ်ယူ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃။ အသုံးပြုသူသည် အမည် အပြည့်အစုံကို Name Tune အဖြစ် တောင်းဆိုနိုင်ပါသလား။
အသုံးပြုသူသည် အမည် အပြည့်အစုံကို Name Tune အဖြစ် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ MPT call center, MPT Facebook page နှင့် Content Provider call center သို့ အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ် ပေးပို့ပြီး ဆက်သွယ် တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၁ လခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး Content Provider သို့မဟုတ် MPT call center မှ ပြန်လည် ဆက်သွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 12, 2018 ဇွန် 7, 2022 Categories Personal Pagemm
MPT Ring Tune ဆိုတာဘာလဲ?
မိမိထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုလာသူတွေကို မိမိနာမည်ပါဝင်သော နှုတ်ခွန်းဆက်စကားသံဖြင့် ဖုန်းမကိုင်မီအချိန်လေးအတွင်းမှာ
နားဆင်နေစေနိုင်မည့် MPT Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
7979 သို့ “ REG D” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
7979 သို့ “ REG M” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
7979 သို့ “ UNR” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
နေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှု : တစ်ရက် ၄၇ ကျပ်
လစဉ်ဝန်ဆောင်မှု : ရက် ၃၀ အတွက် ၁၀၅၀ ကျပ်
Name Tune တစ်ပုဒ် : ရက် ၃၀ အတွက် ၃၁၅ကျပ်
နာမည်ကို လိုတရ http://lotayamm.com/service/crbt/MPTRingTune သို့ဝင်ရောက်၍ နားဆင်ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အမေးအဖြေများကို ကြည့်ရန် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 11, 2018 ဒီဇင်ဘာ 12, 2018 Categories Vas Services MM